Yuda 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yuda Nhoma No 1:1-25
Akyerɛkyerɛfo atorofo atemmu bɛba (3-16)
Mikael ne Ɔbonsam dii anobaabae (9)
Enok nkɔmhyɛ (14, 15)
Momfa mo ho nsie Onyankopɔn dɔ mu (17-23)
Anuonyam nka Onyankopɔn (24, 25)
1 Me Yuda a meyɛ Yesu Kristo akoa ne Yakobo+ nua, merekyerɛw krataa yi akɔma wɔn a wɔafrɛ wɔn,+ Agya Nyankopɔn adɔfo a wakora wɔn so ama Yesu Kristo:+ 2 Mebɔ mpae sɛ Onyankopɔn bɛma moanya mmɔborɔhunu ne asomdwoe ne ɔdɔ pii. 3 Adɔfo, ɛwom, anka merebɔ mmɔden akyerɛw nkwagye a ɛwɔ hɔ ma yɛn nyinaa+ no ho asɛm abrɛ mo, nanso mihui sɛ ɛho hia sɛ mekyerɛw betu mo fo sɛ monko denneennen mfa mmɔ gyidi a wɔde ama akronkronfo no ho ban;+ wɔde maa wɔn prɛko sɛ ɛntena hɔ daa. 4 Nea enti a ɛte saa ne sɛ nnipa bi awiawia wɔn ho aba mo mu. Efi tete na wɔnam Kyerɛwnsɛm no so aka ato hɔ sɛ wobenya atemmu; wɔyɛ amumɔyɛfo a wɔde yɛn Nyankopɔn adom kata wɔn anim bɔ ahohwibra,*+ na yɛn wura ne yɛn Awurade koro pɛ Yesu Kristo nso, wɔpo no.+ 5 Ɛwom sɛ ɛnyɛ asɛm foforo mma mo de, nanso mepɛ sɛ mekae mo sɛ bere a Yehowa* gyee nnipa bi fii Egypt asaase so+ no, akyiri yi ɔsɛee wɔn a na wonni gyidi no.+ 6 Na abɔfo a wɔantena wɔn tenabea na mmom wogyaw wɔn ankasa dibea a wɔde ama wɔn no,+ ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn akyekyere wɔn afebɔɔ wɔ sum kabii mu, na wɔakora wɔn so ama atemmu da kɛse no.+ 7 Saa ara na Sodom ne Gomora ne nkurow a atwa ho ahyia nso yɛe; aguamammɔ* a ɛyɛ tan ne nna ho akɔnnɔ a ɛyɛ abofono*+ na wokodii akyi, na wɔde daa ogya twee wɔn aso de yɛɛ kɔkɔbɔ maa yɛn.+ 8 Eyi nyinaa akyi no, saa nnipa yi nso ayɛ wɔn ho adaesofo; wogu nkurɔfo* ho fĩ, wommu tumidi na wɔkasa tia anuonyamfo.+ 9 Nanso bere a ɔbɔfo panyin+ Mikael+ ne Ɔbonsam redi akameakame ne anobaabae wɔ Mose amu+ ho no, wamfa ne pɛ ankasa antia no ammu no atɛn,+ na mmom ɔkae sɛ: “Yehowa* nka w’anim.”+ 10 Saa nnipa yi de, nneɛma a wɔnte ase nyinaa wɔka ho asɛmmɔne.+ Na nea wɔte ase nyinaa nso, wɔde atenka na ɛyɛ, te sɛ mmoa a wonni adwene,+ na wɔyɛ de sɛe wɔn ho. 11 Wonnue, efisɛ wɔafa Kain+ kwan so, na mfaso nti wɔapere wɔn ho akɔfa Baalam kwammɔne+ no so; wɔasuasua Kora atuatew kasa+ no,+ enti wɔbɛsɛe te sɛ ɔno! 12 Saa nnipa yi ne mo bom didi wɔ mo dɔ adidi ase,+ nanso wɔyɛ abotan a ahintaw wɔ nsu ase; wɔyɛ nguanhwɛfo a wodwen wɔn ankasa yafunu ho a wonsuro hwee;+ omununkum a nsu nnim na mframa de di akɔneaba;+ nnua a twabere adu nanso ɛnsow aba, awuwu koraa,* na ase atutu; 13 wɔyɛ ɛpo asorɔkye a wohuru kutukutu puw wɔn ankasa aniwude;+ nsoromma a ekyinkyin kɛkɛ a wɔakora sum kabii so ama wɔn daa.+ 14 Yiw, Enok+ na ɔto Adam so ason wɔ awo ntoatoaso mu, na ne nkɔmhyɛ yi fa wɔn ho. Ɔkae sɛ: “Hwɛ! Yehowa* de n’ahotefo mpempem pii bae,+ 15 na obebuu obiara atɛn,+ na nneɛma bɔne a amumɔyɛfo nyinaa yɛ tiaa Onyankopɔn ne ahodwirisɛm a nnebɔneyɛfo a wonsuro no ka tiaa no nyinaa+ nti, obuu wɔn fɔ.” 16 Saa nnipa yi yɛ anwiinwiifo+ a nea wɔwɔ biara nsɔ wɔn ani; wodi wɔn ankasa akɔnnɔ akyi,+ na wɔn ano ka nsɛm akɛse, na wɔn ankasa mfaso nti, wɔhoahoa nkurɔfo.*+ 17 Adɔfo, mo de, monkae nsɛm a yɛn Awurade Yesu Kristo asomafo no kae* no; 18 wɔka kyerɛɛ mo sɛ: “Awiei mmere no mu no, fɛwdifo a wodi wɔn ankasa akɔnnɔ bɔne akyi bɛba.”+ 19 Eyinom ne wɔn a wɔde mpaapaemu ba,+ nnipa a wodi ɔhonam akɔnnɔ akyi a wɔmma Onyankopɔn honhom nkyerɛ wɔn kwan. 20 Adɔfo, mo de, momfa mo gyidi kronkron no nyɛ fapem nhyɛ mo ho den, na mommɔ mpae wɔ honhom kronkron mu,+ 21 sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛkɔ so de mo ho asie Onyankopɔn dɔ mu,+ bere a motwɛn yɛn Awurade Yesu Kristo mmɔborɔhunu a ɛkɔ daa nkwa+ mu no. 22 Afei nso, wɔn a wɔn adwene hinhim+ no, monkɔ so nhu wɔn mmɔbɔ;+ 23 munhwim wɔn+ mfi ogya mu nkɔ nkwa mu. Na ebinom nso, monkɔ so nhu wɔn mmɔbɔ, nanso monyɛ ahwɛyiye,* efisɛ wɔde ɔhonam nnwuma+ asɛe wɔn ntaade mu. Enti munkyi wɔn ntaade a nneɛma akeka mu no. 24 Afei nea otumi bɔ mo ho ban sɛnea ɛbɛyɛ a biribiara rento mo hintidua, na ama moayɛ nnipa a dɛm nni mo ho+ na mode anigye kɛse agyina n’anuonyam anim no, 25 yɛn Agyenkwa Nyankopɔn koro no, ɔno na anuonyam, kɛseyɛ, tumi ne ahoɔden nka no mmeresanten ne nnɛ ne daa wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mu. Amen.
^ Anaa “yɛ aniwude.” Efi Greek asɛmfua a·sel′gei·a mu. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “etia ɔbrasu.”
^ Nt., “awuwu mprenu.”
^ Anaa “wɔde wɔn ano fa nkurɔfo ho.”
^ Anaa “ka de hyɛɛ nkɔm.”
^ Nt., “monyɛ saa osuro mu.”